Poortaalii:Aadaa Oromoo - Wikipedia
Poortaalin kun odeeffannoo waa'ee aadaa Oromoo karaa qindaa'aa ta'een dhiyeessa. Oromoon aadaa ball'aa qaba: Sirna Gaadaa irraa kaasee hanga dhahaa mataasaatti, aadan Oromoo wallee, ogbarruu fi amantii Oromoo Waaqeffannaa jedhamu of keessatti qabata.
Aartii Afaan Fiilmii
Ispoortii Nyaata aadaa Ogbarruu
Qoricha Tiyaatira Wallee
Odaan Oromoodhaf muka qulqullaa'aa kan yaa'ii siyaasaa fi amantii jalatti geggeessan ta'uu fi kanaafis akka mallattoo Oromoota biyya isaanii (Oromiyaa) fi aadaa isaanii wajjin walqabsiisuuf kan filatame ta'u beektaa?
Sirna Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo ti. Gadaan jaarmayaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta'u sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. Sirni Gadaa diimookraatawaa ta’uu isaa beektoonni seenaa fi saayinsii hawaasaa hedduun mirkaneessanii jiru.
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Poortaalii:Aadaa_Oromoo&oldid=27138"
Last edited on 3 Muddee 2014, at 18:06
This page was last edited on 3 Muddee 2014, at 18:06.